Xagaaga Iswiidhan gudeheeda inta uu jiryo covid-19 - Krisinformation.se
TB17 Dillaacidda cudurka covid-19 wuxuu saameynayaa sida aan Iswiidhan gudeheeda ugu safri karno, fasaxa ugu gaadan karno, waqtina isugula qaadan karno xagaaga. Halkan waxaan isugu ururinnay hey’adaha dowladda iyo laacibiinta kale macluumaadkooda ku aaddan xannibaadaha iyo talooyinka khuseeya safarrada, nolosha hawada furan, teendheynta iwm.
Talooyinka guud ee soo socda
Guriga joog haddii aad leedihid calaamado cudur
Masaafo dadka u jirso
Taxaddir lahaw marka aad booqaneysid dad ah 70 jirro iyo ka badan ama ka tirsan koox khatar ku jirta.
Ka fogaw munaasabadaha bulshadu isugu imaaneyso
In badan gacmaha ku dhaq saabuun iyo biyo
Dadka calaamado cudur aan lahayn way safri karaan gudaha Iswiidhan oo tani waxay bilaabantahay inay dhaqan-gasho 13 Juun 2020. Inta lagu jiro safarkan iyo inta meeshaas la joogo labadaba waa muhiim in aad ka durugto dadka kale oo iska ilaaliso meelaha ciriiriga ah. Ka hor intaanad safrin, ka hubi maamulka gaadiidkaas wixi ku saabsan nidaamyada cusub, tilmaamaha iyo sida gaadiidkan uu raad ugu yeelanayo is qaadsiinta cudur. Raac macluumaadka ka yimi degmada aad ka fikirayso inaad booqato iyo waxa ansax ka ah meeshaas. Ka fogaw isku imaatinyada ay bulsho badan joogto.
Xitaa shirkadaha gaadiidka waxaa xilsaaran, in ay kaalin ka geystaan hoos u dhigida heerka ciriiriga, iyo xad u yeelida tirada rakaabyada ee gaadiid kasta saaran.
Raac talooyinka guud ee ku saabsan sida aad naftaada iyo dadka kaleba u ilaalinayso. Guriga joog haddii aad buktid, badanaaba gacmaha dhaq, ku qufac laabatada xusulka, dadka kalana masaafo u jirso.
Doorashada ugu horeysa ee aad ku safrayso ha ahaato gaadiidka kale ee aan ahayn gaadiidka dadweynaha ka dhaxeeya. Hadiiba aad u baahato inaad ku safarto gaadiidka dadweynaha ka dhaxeeya, dooro qaabka ay suurtagal tahay inaad ballansato goob aad fariisato.
Xal ma noqon karo in qof kasta u gaarigiisa socdaal ku galo. Maxaayeelay, waxay abuuri karaan ciriiriga waddooyinka gaadiidka. Taasoo iyadana hakad gelin karto socdaalada iyo gaadiidka bulshada lagamamaarmaan u ah. Haddaba sidii socdaalada iyo gaadiidka bulshada lagamamaarmaan u ah loo hirgelin lahaa awgeed, loogana hortegi lahaa hakadyada gaadiidka ama heerka faafinta cudurka awgood, waa in qof kasta u arrintaan kaalin ka geysta.
Socdaal gal haddii lagamamaarmaan u yahay – ku dadaal in aadan socdaal gelin saacadaha ugu socdaalada badan.
Haddii aad kari karto adeegso baaskiil ama goobta u lugeey.
Micnodarro awgeed beddelka gaadiidka dadwnaha dartiis ha isticmaalin gaarigaaga.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku aaddan safarrada gudaha iyo gaadiidka maxalliga ah
Dibad ka soo gelidda Iswiidhan
Ma jiryo wax shardi ah oo ku aaddan in la karintiilo musaafiriinta Iswiidhan dibadda ugu imaanaya. Sidoo kale ma jiryo shardi ku aaddan af ilaaliye marka lagu jiro xaaladaha caadiga ah ee bulshada dhexdeeda ah.
Hey’adda caafimaadka bulshadu waxay beddel ahaan ku talineysaa in:
dadka buka ay guryahooda joogaan
qofku dadka kale u jirsado masaafo dhan ugu yaraan gacan dhererkeed
gacmaha in badan lagu dhaqdo saabuun iyo biyo.
Garoomada dayuuradaha qaarkood waxaa ka jiri kara talooyin gaar ah oo ku aaddan in af dhawr la isticmaalo. Swedavia Airports waxay ku talineysaa in aad garoomadooda dayuuradaha ku isticmaashid af dhawr. U feejignaw macluumaadka ay shirkaddaada dayuuraduhu ku siineyso – shirkado dayuureed oo fara badan waxay shardi ka dhigaan in afka la duubto xitaa diyaaradda dusheeda.
Muwaadiniinta ajaanibta ah ee leh calaamado cudur si lacag la’aan ah ayey xaq ugu leeyihiin tijaabada PCR. Kuwa rabaan in tijaabo noocaas ah lagu sameeyo waxay la xiriiri karaan gobalka ama 1177.
Musaafiriinta ajaanibta ah ee raba in ay iska qaadaan tijaabada unugyada lidka ku ah cudurka si ay caddeyn safar u helaan waxay iyagoo kharashka iska bixinaya taas ka ag sameyn karaan shirkado caafimaad oo gaar loo leeyahay.
Jooji qaadsiinta cudurka – waxan qof caadi ah ahaan waad sameyn kartaa
Dalalka aan socdaal ku tegi karo waa kuwee?
Wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku talinaysa in dalal badan aan socdaal loogu tegin, waa haddii socdaalada aynan aad muhim u ahayn. Dalalka loo socdaali karo waxaa kamid ah:
Dalalka kale ee ku yaalaan Midowga Yurub, Is-bahaysiga dalalka Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein iyo kuwa loo yaqaanno dalalka Shengen, waxaa khuseeya talada wasaaradda ilaa markii taariikhda ay ku began tahay 23 setembar.
Kuwa kalena, (oo ka reeban Midowga Yurub, Is-bahaysiga dalalka Midowga Yurub, Norway, Iceland iyo Liechtenstein iyo kuwa loo yaqaanno dalalka Shengen) waxaa khuseeya talada wasaaradda ilaa markii taariikhda ay ku began tahay 15 setembar.
Akhriso wax dheeraad oo ku aaddan safarrada dibadda.
Nolosha hawada furan
Nolosha hawada furan ee Iswiidhishka waxaa la rejeynayaa inay xagaaga aad u kororto. Dabcan in dad badan ay u baxayaan dabiicada waa wax wanaagsan, waana wax hey’adaha dowladdu ay dhiirri gelinayaan. Isla mar ahaantaasna aad bey muhiim usii tahay in dhammaan tixgelin loo muujiyo dabiicada, nolosha xayawaannada, milkiilayaasha dhulka iyo dadka kale.
Xuquuqda tamashleynta – xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga dabiicada
Xuquuqda tamashleyntu waxaa ay ka dhigantahay in aad si xor ah ugu dhaqdhaqaaqi kartid dabiicada iyadoo aadan fasax weydiisan milkiilaha dhulka. Laakin waxaa jira waxyaabo qaarkood ay khasab tahay in aad ka fikirtid marka aad dibadda joogtid oo aad ku lugeyneysid, ku teendheyneysid, meelo ku koreysid, doon ku raaceysid ama wax kale ku sameyneysid meelaha furan.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku aaddan waxay xuquuqda tamashleyntu ay ka leedahay dhaqdhaqaaqa kala duduwan. Isku xire kuu gudbinaya Hey’adda daryeelidda dabiicada.
Hey’adda daryeelidda dabiicada iyo jardiinooyinka qaranku waxay leeyihiin xeerar gaarka ah
Xagga aagagga la ilaaliyo sida tusaale ahaan seerada dabiicada iyo jardiinooyinka qaranka waxaa jira xeerar gaar ah oo loogu tala galay in lagu ilaaliyo dabiicada. Waxay ka dhignaan karaan in xuquuqda tamashleynta lagu koobo meelo gooni ah laakin meelo kale la kordhiyay. Aag la ilaaliyay waxaa tusaale ahaan mamnuuc ka ahaan kara in dab lagu shito, in doon la geysto ama in ey lagu heysto, laakiinse dhanka kale waxaa la oggolaan karaa in isku hal meel dhawr habeen teendho laguu muto. Xeerarka aagga khuseeya waxaa laga akhrisan karaan sabuuradda wax lagu dhejiyo ee aagga ama baraha intarneetka ee degmada ama maamul gobaleedka.
Si aamin ah dab u shido – ka fikir khatarta gubashada
Mar walba waa in aad taxaddirtaa marka aad dabiicada dab ku shidaneysid iyadoon taas loo eegeyn in aad isticmaaleysid kushiin teendho, qalab wax lagu dubto ama goob dab lagu shito iyo kale. Inta lagu jiro xagaaga marka ay dibaddu qallalantahay aad bey muhiim u sii tahay in khatarta gubashada laga fikiro.
Taas ka fikir inta aadan dabiicada dab ku shidan:
Iska hubi in aysan mamnuuc ahayn in meesha dab lagu shito. Markaas waa mamnuuc in dab lagu shito iyo in wax lagu dubto jiqda iyo dhulka, xitaa meelaha sugan ee dabka lagu shito. Macluumaadka ku saabsan mamnuucidda dab shididda waxaad ka heleysaa baraha intarneetka ee degmada ama maamul gobaleedka.
Jardiinooyinka qaranka iyo seerooyinka dabiicada waxaa badanaa khuseeya xeerar gaar ah. Waxaa dhici karta in gebi ahaanba la mamnuuco in dab la shito ama loo oggolaado oo keliya meelo sugan oo dab shidasho. Xeerarku waxay ku cadyihiin sabuuradaha wax lagu dhejiyo ee aagga, waxaadna xitaa macluumaad dheeraad ah ka heli kartaa degmada ama maamul gobaleedka.
Dooro goob aaamin u ah in dab lagu shito si dabku uusan khatar ugu gelin in uu faafo.
Iska ilaali in aad gaariga uga dhex tagtid aalkolada gacmaha maxaa yeelay waxaa ku jira aalkolo oo waxaa loo arkaa in ay aad dabka khatar ugu tahay. Heer kul sare haddii uu helyo dhimbilo ama holac wuxuu dhalin karyaa dab. Waxay dhimbilo dhalan karaan marka tusaale ahaan la xirayo ama la furayo albaabka gaariga.
Cariishyada buuruhu waxay u baahanyihiin in horay loo bokimto
Iyagoo ay ugu wacantahay khatarta isqaadsiinta cudurka ayuu Ururka dalxiiska ee Iswiidhishku, STF, soo rogyay xannibaado ku aaddan inta qof ee ku hoyan karta cariishyada buuraha ee ururka. Buuro ku lugeeyayaashu waxay sidoo kale u baahanyihiin in ay boos ka bokimtaan cariishyada iyo in ay horay lacagta u sii bixiyaan.
Xitaa cariishyada buuraha ee gaarka loo leeyahay waxaa dhici karta in ay soo rogeen xeerar kuwan la mid ah. Adigaaga ku firkiraya in aad xagaaga hayaantid waxaa sidaas darteed laguugula talinayaa in aad wax iska baatid in aadan waddada fuulin.
Goobaha maaweelada, beeraha xayawaannada iyo meelaha biyaha lagula raaxeysto
Iyadoo ay sababtu tahay mamnuucidda ku aaddan isu imaashada guud ee in ka badan 50 qofood waxaa beeraha madadaallada lagu qasbayaa in ay xagaaga xirnaadaan. Noocyada kale ee beeraha madadaallada, sida beeraha xayawaannada, waa ay furnaan karaan iyadoo ay dul saaranyihiin xannibaado iyo xayiraado gaar ah. Waxay tusaale ahaan ku saabsanaan karaan in gudaha loo daayo tiro go’an oo booqadayaal ah oo keliya, in tikidhada ay khasab noqoto in horay loo sii goosto ama in la xiro qeyb goobta ka mid ah.
Beeraha maaweelada ee soo gelaya mamnuucidda kuwa ay yihiin waxaa lagu goynayaa xeerarka kala dambeynta, waana Hey’adda booliska cidda qiimeynta sameyneysa. Waa xukuumadda cidda go’aamisay xannibaadaha ku aaddan ugu badnaan 50 qofood iyadoo raaceysa talooyinka Hey’adda caafimaadka bulshada. Inta aadan goob maaweelo booqan iska baar waxyaabaha goobtaas khuseeya. Haddii aad qabtid su’aalo ku aaddan xeerarka kala dambeynta ama adeegyada ay taabanayaan waxaad la xiriiri kartaa Booliska.
Maqaayado iyo meelo laga qaxweeyo
Maqaayadaha iyo meelaha laga qaxweeyo waa ay furnaan karaan iyagoo ka soo baxaya shuruudo gaar ah.
Maaha in uu ciriiri yimaado. Waxyaabaha layska rabo waa in martidu ay isu jirjirsadaan masaafo dhan gacanta dhererkeeda.
Cuntada iyo cabitaanka waa in miiska leesugu keenaa. In cunto la dalbado oo qasnajiga laga ag qaato waxaa la oggolyahay oo keliya haddii taas la sameyn karo iyagoo uusan ciriiri imaan.
Martidu waa in ay mar walba cuntada cuntaa iyadoo miis fadhida.
Cunto la qaato waa la iibsan karaa ilaa inta uusan ciriiri imaaneyn.
Maadaama dhaqdhaqaaq jir ahaaneed uu caafimaadka u fiicanyahay, isboortiga iyo tababarku waa ay sii socon karaan xitaa inta uu faafayo covid-19. Laakiinse nashaadaadku waxay u baahan karaan in la waafajiyo duruufaha markaas jira si loo yareeyo khatarta faafitaanka cudurka.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku aaddan waxyaabaha khuseeya isboortiga iyo tababarka.
Hawlaha xerooyinka iyo guryaha ay carruurtu xilliga xagaaga degaan
Waa muhiim in carruurtu intii suurta gal ah ay sii wataan nashaadaadkooda caadiga ah. Sidaas darteed ayey Hey’adda caafimaadka bulshadu oggoshahay guryaha ay carruurtu xilliga xagaaga degaan, haddii kooxo yaryar loogu qabanayo. Laakin cidda meesha hawshu ka socoto mas’uulka ka ah waa in ay hubisaa in la yareeyo khatarta faafitaanka cudurka corona.
Hoteel, albeergo iyo meel teendhooyin lagu muto
Hoteellada, albeergooyinka iyo meelaha teendhooyinka lagu muto waa in ay hubiyaan in shaqaalaha iyo martidu ay la socdaan oo ay raacaan talooyinka Hey’adda caafimaadka bulshada. Meelaha la booqanayo waa in ay awoodaan in ay safafka xal u helaan marka tusaale ahaan furayaasha la qaadanayo (tusaale, in ay tusaan inta ay martidu isu jirjirsanayaan). Shaqaalaha iyo booqadayaashu waa in ay sidoo kale fursad u helaan in ay gacmaha ku dhaqdaan saabuun iyo biyo iyo aalkolada gacmaha intaba.
Haddii meeshu ay leedahay maqaayad, baar, ama biibito waa ay soo geleysaa xeerarka isciriirinta ee Hey’adda caafimaadka bulshada ee tusaale ahaan loogu tala galay maqaayadaha iyo meelaha khamriga lagu cabo.
Munaasabadaha laga yaabo in la qabsado wey saameyn kartaa mamnuucidda ka dhanka ah isu ururidda dadweynaha iyo kulamada guud.
Goobaha dabaashu sooma gelayaan mamnuucidda guud ee isu imaanshada dad ka badan 50 qofood. Talooyinka guud ee ku aaddan in masaafo leesu jirjirsado waa ay khuseeyaan.
Uppdaterades 10 sep 2020 19:00